Ntuzi zuru oke
11 Ka 2017
Achọrọ Oge Awa na "Ịntanetị Mmekọrịta" - CISCO
Ụlọ ọrụ IT bụ ihe dị iche iche n'etiti ụlọ ọrụ dị iche iche mgbe ọ bụla ụlọ ọrụ kwadoro maka amara ya dị ka ọrụ, ịkwụ ụgwọ, nkwanye ùgwù na mmegide ọ nwere. Mkpa nke ọnọdụ maka ịnọ, ịzụlite na imewanye na azụmahịa IT mere ka echiche nke "IZIRỊTA" na ọganihu ngwa ngwa, na ọganihu na "IZIRỊTA" ewetawo "ndị ọkachamara" n'ọhịa a. Site n'inwe mmasị dị ukwuu maka ndị ọkachamara a ma kwụsị kilter ha dị mfe ịnweta na ebili elu, mmasị maka "ndị ọkachamara kwadebere" amalitela. Taa, ọbụlagodi na nnweta nke "Ndị ọkachamara kwadebere" abụghị ihe niile na-eweta nsogbu, na mkpa ọ dị oke mkpa agbanweela na "Gbaa mbọ hụ ndị ọkachamara" ndị a kwadoro na ngwaike netwọk, usoro, na arụmọrụ. Nkwupụta nke ndị a "Ndị ọkachamara a kwadoro" bụ n'ihi ụzọ ha si kwadebe ma ọ bụ kwadoro na mmepe, nkwenye na usoro mmemme netwọk ndị na-adịbeghị anya. Ihe ndị a "kwadoro na ndị ọkachamara" bụ ndị a kwadoro na "CISCO" .. !!
Ntak emi CISCO nnyemebe ya mere "Ebube"?
Ihe odide nke CISCO
CCNA Certification ma ọ bụ CCNA Training
Chọrọ maka CCNA
Ebee ka ekwenye?
CISCO bụ onye nwe "Mmekọrịta ịkparịta ụka n'Ịntanet" nakwa na ohere ahụ na onye ọchịchị ahụ kwadoro ma ọ bụ nye gị ikike ị ga-abanye na "Ndị ikom nke Eze". Ihe niile a tụlere, nke a bụ otu ihe kpatara eziokwu bụ na CISCO ji n'aka na ndị ọkachamara nwere nghọta zuru oke nke netwọk weebụ, ihe, netwọk dị iche iche dabara n'otu ebe na ụzọ, ihe ka ukwuu n'ime ihe ndị dị na ụlọ ọrụ netwọk, na usoro ihe omumu nke uwa taa, sitere na CISCO. Taa CISCO bụ ihe dị ịtụnanya, nke na-enweghị mgbagha, onye ọsụ ụzọ zuru ụwa ọnụ na azụmahịa netwọk. Ọ na-enye azịza nke ndị ahịa dị iche iche gadget na netwọk dịgasị iche iche na-etinye mgbalị, na-eme ka ịnweta na mgbanwe nke data n'etiti ndị dị mfe, n'agbanyeghị ụdị dị icheiche oge, ebe na nkebi. CISCO na-ezipụta mkpebi mmemme netwọk na njedebe, na-eme ka usoro ihe omume dị iche iche nye ụlọ ọrụ netwọk a pụrụ iche. Ọbụna ọ na-enye ọtụtụ ụdị ngwá ọrụ iji mee ka ọ bụrụ Cisco Internetwork System Software. Nke ahụ bụ ihe kpatara na ndị mmekọ na-arịọ maka mmasị maka ọkachamara nke CISCO kwadoro na ọ bụ "ọkachamara CCNA". The "Cisco Certified Network Associate" ọzụzụ bụ nzaghachi nke taa iji mee ka a kwalite ọrụ gị.
Ihe Odidenke CISCO
Ọ bụ ihe na-akpali akpali ịchọta otú etiti CISCO si bụrụ onye na-achịkwa nnukwu ụlọ ọrụ azụmahịa. Ọ na-aga azụ na 1980 mgbe Len Bosack na Sandy Bosack, na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ PC dị iche iche na Mahadum Stanford mere ihe nkesa ebe PC ha nwere ike ịgwa ibe ha okwu iji mgbakọ IP. Na 1984 ha kwadoro "Cisco Systems" na mgbe e mesịrị na 1992 a gbanwere aha ahụ na "CISCO Systems, Inc.". N'oge ahụ ha mere "Servers Portal ole na ole" nke a na - akpọ "Old Alphabet Soup Products" dịka, - AGS; MGS; CGS; IGS na AGS +. N'ime otu afọ CISCO nyere ihe mgbagwoju anya 4000 switches, 7000, 2000, na nhazi 3000 gbanwere. N'oge na-adịghị anya, CISCO ghọrọ onye ọkachamara na-achọsi ike ma chọọ ọkachamara ọkachamara n'ahịa azụmahịa. Nke ahụ wetaara ha ụdị ule ọzọ, nke bụ ụzọ ha ga-esi na-elekọta ha n'ọtụtụ ọkwa na ebe dị iche iche. Inwe ihe mgbagwoju anya na ndokwa choro oru di omimi iji webata, lelee ma nyochaa ha. Nzaghachi kwesịrị ekwesị dịka - usoro Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE). Ebumnuche ahụ bụ isi - ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ a ga-ewebata chọrọ ndị ọkachamara nwere nkà bụ ndị nwere ike ime otu a n'agbanyeghị na ilekọta ma nyochaa mgbe achọrọ. Usoro ihe omume ahụ kwadebere ndị ọkachamara nwere ike ịme ihe ndị a nile ma mezuo dị ka achọrọ. Usoro mmemme ahụ mere ka ndị mmadụ n'otu ọkwa dị iche iche nwere ikike, njikwa nke netwọk atụmatụ na ịkwalite na-emeghe ụzọ niile, nke a na-emebu na di na nwunye. "CCNA certification" bụ nzọụkwụ mbụ ma ọ bụ na ị nwere ike ịkpọ ya "nkume na-agba agba" na ndokwa a.
CCNA Certification bụ akwụkwọ ikike maka iwu maka onye ọ bụla na-arụ ọrụ netwọk nke chọrọ ka CISCO kwadoro ya. Asambodo ọ bụla ọzọ na-agbaso asambodo a dị mkpa. Uru nke ịbụ CCNA Certified / Certification dị ọtụtụ, iji depụta di na nwunye -
Ndị na-ahazi na-eme ndokwa nke aptitudes iji kọwaa nkà nke onye ọkachamara nwere ike iji ụgbọ mmiri mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị na mpaghara ndị na-arụ ọrụ netwọk. Ha nwere ike idebe nke a dị ka ụkpụrụ maka ịhọrọ onye asọmpi.
A na-enye ndị mmadụ ikike iche echiche, ịmebata na ịmekọrịta Cisco Internetwork System Operating na Cisco akụrụngwa. Kedu ihe ọzọ, mkpịsị mkpụrụ na ntanetị nke Ịntanetị na-enye ntụziaka ọzọ na ihe mgbaru ọsọ ha nwere ike ịgafe gburugburu gburugburu "Ndị na-abụghị Cisco".
Nchịkọta CCNA ga-enye gị ọkwa ebe CCNA certification ga-aghọ ihe ikpo okwu maka mmezu, na ọrụ a na-akwanyere ùgwù.
Akaụntụ CCNA gị ga-enyere gị aka ịgbatị ihe karịrị nkwekọrịta ndị ọkachamara, n'ime na mkpakọrịta ndị ọzọ.
Ị na-enwusi ike maka akwụkwọ ikikere ọzọ, mgbe ị bụ CCNA Certified, dị ka - CCNP (Cisco Certified Network Professional); CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) CCDA (Cisco Certified Design Certification) na CCDP (Cisco Certified Design Professional).
A na-ewere gị dị ka onye na-elekọta netwọk, onye maara ihe, na ihe ezi uche dị na ya iji kpebisie ike ịhazi netwọk mmekọrịta ma ọ bụ kpọọ usoro netwọk ọrụ.
Nnukwu nkwenye, dị ka onye na-arụ ọrụ na netwọk, nke CCNA certification mgbe ọ dị iche na ihe ọ bụla ọzọ asambodo na-eme ka ọ bụrụ nzube n'azụ arịrịọ ahụ. Ị na-enweta ihu ọma n'agbanyeghị na ị ga-enweghi afọ dị iche iche nke ahụmahụ na-agbakwunye gị.
Otú ọ dị, ị ghaghị ịma banyere ikike ndị dị mkpa ị ga-enweta iji nweta akwụkwọ CCNA ma ọ bụ ọzụzụ CCNA.
Ihe ndị a na-esote bụ ụzọ dị mkpa ị kwesịrị isi nwee-
Nghọta nke isi LAN, na-eduzi netwọk WAN na LANE, nhazi ha, nhazi na otu esi arụ ọrụ ha.
Hazie ma ọ bụ webata netwọk na mkpụrụ na bolts nke IP, IPX, Relay, Ethernet, na VLANs.
Nyefee ohere ntanetị, ịmụta ngwa ọhụrụ dị ka ahia Ịntanetị, mgbasa ozi mmekọrịta, na ihe ndị ọzọ.
Ị ga-enweta ọzụzụ CCNA site na ntọala nke na-elekọta nlekọta ahụike ma nyere gị aka ịnweta ihe ndị dị elu nke ihe ọmụma site na ịmepụta atụmatụ mara nke ọma iji gosipụta gị n'ịkwalite nhazi netwọk, na-ahụ maka ịkparịta ụka n'Ịntanet na aka na nlele ọnọdụ, yana ọzọ esi arụ ọrụ netwọk. I kwesiri ịkwado nke a ka afọ ojuju nke otu a maka ikike ndị ọkachamara. Ị ga-enweta ihe ọmụma dị iche iche nke ndị ọkachamara, nke azụmahịa na ikike nchịkwa ka ị nwee ike ịmepụta ikike dị iche iche mgbe ị nwere ahụmahụ dị mma. Ị ga-enweta ụgwọ dị oke mkpa na nhazi Cisco na ịgbanwere akwụkwọ mmezi. Ole na ole n'ime isiokwu ndị dị mkpa ị ga-amata bụ -
Ụdị a na-echekwa ya na mmasị ya
Usoro ntụziaka OSI na ọnọdụ ya dị mma
Osis asaa nke OSI
Ụgbọ mmiri na-achịkwa ụgbọ mmiri
Njikwa ọsọ na ihe ọmụma data
Cisco ịgbanwe ihe
Usoro mkpokọta nke osisi
LAN Ọganihu na-agbanwe, Ụdị mgbanwe na ha na-arụ ọrụ na nchekwa-2 Switches
Ịhazi nchịkwa nke IOS
Igwe Teknụzụ Na-arụ ọrụ na IP
Cisco Internetwork na nchịkwa ya
NoveX IPX na nhazi ya
Network dị mkpa
Ọrụ mmepụta ihe, nchekwa, na nchịkwa
Iji mee ka o doo anya, ebumnobi kwesịrị ịmalite ịmalite ịbanye LAN na mgbanwe dị iche iche, nlekọta VLAN, osPF na EIGRP, ọrụ na ikike netwọk, uru igwe ojii ma nyochaa ihe mgbagwojiri netwọk maka ịrụ ọrụ dị mfe nke netwọk ahụ.
Nlekọta CCNA site na nguzobe na ihe omuma na ihe omuma bu ihe nke kwesiri iburu na ichota. Nhazi dịka - "KOENIG Ngwọta" ndị kachasị mma na ụlọ ọrụ ọkachamara na ụlọ ọrụ ntinye akwụkwọ maka olileanya, nkwenye, na ndị ọkachamara, na ọkwa niile nke netwọk chọrọ. Ha nwere ihe karịrị 300 kwadoro ndị nkuzi bụ ndị ọkachamara na mpaghara ha. "Nleta KOENIG" dị ka ndị ọsụ ụzọ zuru ụwa ọnụ na ọzụzụ netwọk. Ha na-ewepụta usoro ọzụzụ site na klas nke ziri ezi na ahụmahụ ihe nkiri ahụ, iji zipụ onye nkụzi na nnọkọ oriri gị. Onye ọ bụla nke na-achọ ọrụ dị egwu na netwọk, site n'aka onye ọkachamara nwere ike inweta akwụkwọ CCNA n'aka ha.
O yikarịrị ka ịnwe ihe dị ka ihe ọzọ na-eme ka ike gị dị ukwuu na ụwa a dị oke egwu ma na-eche banyere ụlọ ọrụ netwọk ọ bụ nnọọ ihe dị mkpa iji nwee ụdị ihe ahụ. Ọ bụghị nanị asambodo nke na-arụ ọrụ, kama ọ gbakwunyere na ịmara, ntụziaka, njigide, data na nghọta nke ga-eme ka ị gaa n'ihu ma dị irè n'ọnọdụ nile nke ọnọdụ netwọk. Mgbe ị kwụsịrị CCNA certification, a kwadoro gị na mba ụwa n'agbanyeghị agbasapụ na ederede na topographical. Ị onwe gị na-abanye na isi iyi nke data na echiche nke mgbe a gbasasịrị n'amaokwu ziri ezi ọ bụghị nanị uru bara uru na ịmepụta òtù ndị na-abaghị uru ga-erite uru na ndị mmadụ na ndị mmekọ gị. Otú ọ dị, ịnweta CCNA Asambodo bụ, n'agbanyeghị nke ahụ, ngwaahịa ndị dị na ya na-atọ ụtọ ma nye gị ohere ileghara nsogbu ọ bụla anya. A na-ekwu na enweghi ihe ọmụma dị iche iche nke rụzuru ihe ọ bụla na mpaghara netwọk na e nwere otu - nke ahụ bụ CCNA Certification.